No. 1 Wararka Abaalka | Aasaaska Abaalmarinta: Jacaylka, Jinsiga & Internetka
Bogga ugu weyn Maya. 1 Warfaafinta
Waxyaabo badan ayaa ka socda Hay'adda 'Reward Foundation', sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan bilowno 'Abaalmarinta Abaalmarinta' oo ah warar soo koobaya oo soo muuqan doona lix jeer sanadkii halkii saddexdii biloodba mar. Waxaan tweet gareynaa maalin kasta sida ugu macquulsan oo aan u sameyno sheekooyinka wararka toddobaadlaha ah sidoo kale. Haddii ay jiraan wax aad jeclaan lahayd inaad aragto annaga oo daboolan, kaliya sidaas dheh. Dhammaan jawaab celinta waxaa lagu soo dhaweynayaa Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Sanduuqa Bakhtiyaa Bixinta
"Apple, Google, Facebook? Waxay yihiin kuwa ugu muhiimsan iibiyeyaasha daroogada "
Is-naxariisto: Dib u eegista Buugaagta
Wakhti dheer, raali gelin ...
Xidhiidhka u dhexeeya Porno iyo cidlo
Porn gudaha xiriirka
Baarlamaanka Baarlamaanka Waxbarashada iyo Xirfadaha Xirfadaha 'Scotts Parliament' ee PSHE
NEWS, VIEWS iyo SHARCIYADA
Hay'adda Abaalmarinta Reward ayaa ku faraxsan inay ku dhawaaqdo inay heshay abaalmarin Maalgelinta Fikradaha socodka Sanduuqa Bakhtiyaa Bixinta. Mashruuceenu wuxuu leeyahay 'magac-heesaha-ku-eg-da' Kor u qaadidda garashada maqaallada filimada sawirada ee Dhalinyarada Scotland. Ujeeddada ayaa ah in la horumariyo qorshooyinka casharrada ee dugsiyada iyada oo qayb ka ah barnaamijka Waxbarashada Dadweynaha & Caafimaadka Bulshada (PSHE).
Waxaan diiradda saari doonnaa awoodda lebbiska si aan maskaxda uga badinno iyadoo saameyn ku yeelaneysa caafimaadka maskaxda iyo jirka, hanashada, xiriirka iyo dambiyada. Waxaan sidoo kale calaamadeyn doonnaa siyaabo aan uga joojin karno lebbiska oo aan u adkeysan karno. Waxaan ku faraxsanahay inaan heysano hibada macallimiin yar iyo arday si ay nooga caawiyaan horumarinta madadaalo, is-dhexgal iyo agab ku habboon da'da.
Akhri sidan u fiican article oo ku saabsan sida Facebook uu si macno leh u maskaxdaada u maskaxdaada. Aqoonyahanada ayaa ku dhawaaqaya sida wiilasha waawayni ay uga faa'iideysanayaan niyaddeenna dareenka ah inay nagu soo dejiso oo nagu celiso dib usoo celinta. Waxay sameeyaan billions iyo annaga, gaar ahaan qaangaarka, waxay ku dhammaan karaan niyadjab, walaacsanaan iyo ku qancin nolosha.
Waxaanu ku mashquulsanahay falanqeynteena wareysiyada fiidiyowga. Waxaanu ku sameynay kuwo cusub oo ay la socdaan jilitaanka dhalinyarada Robbie Gordon oo ka socda Scottish Wonder Foolsshirkadda tiyaatarka iyo Christian McNeill, oo ah tababare dhiirogelin leh oo dhiirigeliya Qaybaha Weyn. Waxaan sidoo kale bilawnay howsha gaabiska ah ee barashada sida loo habeeyo fiidiyowyada. Qorshaheennu waa inaan wareysiyada qaar ku yeelano bogga toddobaadyada soo socda. Waanu qori doonaa markii ay khadka ku jiraan.
Waxaan jeclaan lahayn inaan kugula talino buug aad u fiican Naxariisto Iskuday - Jooji Iskudhaca Naftaada iyo Ka Baxso Nabadgelyada Kadib by professor ee horumarinta aadanaha Kristin Neff. Waxaan maqalnay Kristen oo ku saabsan buugeeda shirkii sannadkii hore oo la yaabay. Waxay ahayd inay ka adkaato dhibaatooyinka dhabta ah ee nolosheeda sidaa daraadeed ma ahan aragti. Buuggu wuxuu bixiyaa xal xooggan oo loola dagaallamo niyad-jabka, walwalka iyo is-naqshad-xumida oo ku soo noolaato dhaqan cadaadis leh. Waxaa jira jimicsi la isku dayey oo la isku imtixaanado iyo codsiyada dhegeysiga oo lacag la'aan ah. Waa buug fara badan oo faa'iido leh.
Sidaa daraadeed, wakhti dheer...
TRF waxay macasalaameysay Jamie Wright iyo David Martin, labada arday ayaa sanadkaan meeleeyay jaamacada Napier. Waxay naga caawinayeen horumarinta websaydhadeena waxaanan rajaynaynaa inay ka heshay khibrad shaqo oo waxtar leh. Nasiib wacan iyaga marxaladda xigta ee shaqadooda.
WAA MAXAY LOOGU TALAGALAYSO WAXAY YIHIIN ...
Hadda waxaa jira caddayn in lamaanaha lagu salaaxo ayaa ka macaan badan salaaxida qof kale ama naftaada. In la salaaxo waxay yareysaa heerka garaaca wadnaha. Tani waa wax ay NHS u tixgelinayso inay beddel u tahay kharashyada badan iyo dhibaatooyinka soo raaca ee daroogada. Waxay sifiican uguxirantahay waxa aan kaqaanno dabeecadaha isku xidhka. Eeg halkan loogu talagalay maqaal xiiso leh oo loo yaqaan "Jidka caajiska ah ee jacaylka lagu sii joogo" oo wax badan ka sheegaya sixirka dabeecadaha isku xidhka.
Tani waa markii ugu horeysey, marwalba ama cidlo? Arrintan cilmi kuwa daawaday filimada qaawan waxay u badan tahay inay la kulmaan kalinimo, iyo kuwa kali ku ah kalinimada waxay u badan tahay inay daawadaan filimada. Natiijooyinkaani waxay la jaan qaadayaan cilmi baarista isku xirka u adeegsiga sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka ee saameynta xun / shucuurta.
Waa maxay saameynta porn-ka ee lamaanayaasha? Halkan waxaa ku yaal qaybo ka mid ah Daraasad muhiim ah oo cusub oo uu hoggaamiyo Paul J. Wright:
"Waxay doorbidaan sawirrka sawir-gacmeedyada si ay ula fal-galaan faraxumeynta galmada iyo isku-xidhka xiriirka galmada waxay labaduba la xidhiidhaa qanacsanaanta galmada."
"Inta badan sawirada pornography waxaa loo isticmaalaa sida qalabka dilka ah ee loogu talagalay niyadjabinta, in badanaa shakhsi ahaan waxaa laga yaabaa inay shardi u noqoto fara-xumo iyada oo laga soo horjeedo ilo kale oo ka mid ah jinsiga galmada."
"Waxaan ogaanay in raga iyo haweenka ka yar ay qiimeeyaan isgaadhsiinta galmada, qanacsanaanta jinsiga ah ee gabdhaha ay soo sheegaan."
Bishii Abriil 2017, sharciga cusub ee kufsiga loola jeedo ee Scotland ayaa dhaqan geliyey hoos Habdhaqanka Xadgudubka iyo Sharciga Dhibaatooyinka Galmada 2016. Ciqaabta ugu sarreeya ee la soo bandhigo ama lagu hanjabayo in la soo bandhigo sawirka ama fiidiyaha gacanta waa 5 sano oo xabsi ah. Dembiga waxaa ka mid ah sawirada laga qaaday qolka gaarka loo leeyahay halka qof uu ku dhacay ama uu dharbaaxay ama muujinaya qof ku hawlan fal-galmo. Akhri wax dheeraad ah halkan.
Guddiga Waxbarashada iyo Xirfadaha ee Iskotishka ee Baarlamaanka ayaa kaliya soo saaray warbixintiisa ku saabsan waxbarashada iyo jinsiga. Ardaydu waxay yiraahdeen waxay doonayaan in casharradu ay ka baxaan biyolojiga oo ay ka wada hadlaan xidhiidhyo badan. Hay'adda Abaal-marinta Dib-u-habeeynta (Reward Foundation) waxay diyaar u tahay inay wax ku biiriso xalka Abaalmarinta Sanduuqa Bakhtiyaa-nasiibka ayaa naga caawin doona inaan taas ku guuleysto. (Fiiri kor) Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan warqadda guddiga ayaa la arki karaa halkan.
Xuquuqda daabacaadda © 2018 Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta
Waxaad helaysaa emailkan sababtoo ah waxaad ka dooratay boggayaga internetka www.rewardfoundation.org.
Cinwaanka boostada waa:
Naga sii akhri buugga cinwaankaaga
Ma dooneysaa inaad bedesho sida aad u heshay emails?
Waxaad awoodi kartaa cusbooneysii doorbidkaaga or ka joojin liistadan